मुस्ताङमा सबै बाम उम्मेदवार विजयी ! – ebaglung.com
मुस्ताङमा सबै बाम उम्मेदवार विजयी !
२०७४ मंसिर २२, शुक्रबार १६:३६	Home Slider, Top News, प्रमुख समाचार
केशव विश्वकर्मा, मुस्ताङ २०७४ मंसिर २२ । मुस्ताङ जिल्लामागत मंसिर १० गते सम्पन्न पहिलो चरणको प्रतिनिधि सभा तथा प्रदेश सभाको निर्वाचनमा हिमाली जिल्ला मुस्ताङबाट बाम गठबन्धन (नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्र) का सबै उम्मेदवार विजयी भएका छन् ।
प्रतिनिधिसभा तर्फ बाम गठबन्धनका साझा उम्मेदवार प्रेम प्रसाद तुलाचनले नेपाली कांग्रेसका रोमी गौचन थकालीलाई ३ सय ६३ मतान्तरले पराजित गरेका थिए ।
निर्वाचनमा जिल्लामा भएका ९ हजार ४ सय २७ मतदाता मध्ये ६ हजार ७ सय ७३ मतदाताले मतदान गरेका थिए । जसअन्तर्गत तुलाचनले ३५ सय ४४ र गौचनले ३१ सय ८१ मत प्राप्त गरेका छन् । २५ मत बदर भएको थियो । जिल्लामा ३७ वटा मतदान केन्द्र कायम गरिएको थियो ।
त्यसैगरी प्रदेश सभा क्षेत्र नम्बर १ बाट बाम गठबन्धनका ईन्द्रधारा विष्टले ११ सय ६७ मत प्राप्त गरी विजयी भएका छन् । उनका प्रतिद्धन्द्धी नेपाली कांग्रेसका मिंगुर गुरुङले ६ सय ५७ मत प्राप्त गरेका छन् । सो क्षेत्रमा ३१ सय ५६ मतदाता मध्ये १८ सय ३६ मतदाता निर्वाचनमा सहभागि भएका थिए ।
त्यस्तै प्रदेश सभा क्षेत्र नम्बर २ मा बाम गठबन्धनका महेन्द्र बहादुर थकालीले २५ सय ८४ मतका साथ विजय हासिल गरेका छन् । उनका प्रतिद्धन्द्धी नेपाली कांग्रेसका छिरिङ धावा गुरुङले २२ सय ५९ मत प्राप्त गरेका छन् ।
प्रतिनिधि सभाका लागि एक वटा निर्वाचन क्षेत्र रहेको मुस्ताङलाई प्रदेश सभाका लागि लोमान्थाङ र दालोमे गाउँपालिका गरी क्षेत्र नम्बर १ र बाह्रगाउँ मुक्तिक्षेत्र, घरपझोङ र थासाङ गाउँपालिका गरी क्षेत्र नम्बर २ कायम गरिएको छ
गुल्मीको सवै क्षेत्रमा वाम गठबन्धनको अग्रता !